July 4, 2020 765
कतारमा दुई नेपालीले जनही १५ हजा’र कतारी रियाल पुरस्कार पाएका छन् । कतारमा रहेको नासर अल अली इन्टरप्राइजेस कम्पनीले कम्प’नीमा इमान्दारिपूर्वक काम गरेको भन्दै नुनबहादुर दर्जी र धनुषाका रामशंकर दास बनोधि’यालाई पुरस्कारस्वरुप जनही १५ ह’जार कतारी रिय’ल पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।
उनीहरु’लाई नासर अल अली इन्टरप्राइजेस कम्प’नीका मालिक नासर अल अलीले पुरस्कार’वापत् सो रकम प्रदान गरेका हुन् । पुरस्कार पाउने दर्जी ना’सर अल अली इन्टरप्राइजेस कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न नेपालबाट २००९ मा गएका थिए ।
उनले प’छि राम्रो काम गर्दै गएपछि ट्रेड’वर्कर भए । हाल कार्पेन्टर मेसनरीदेखि सबै काममा पोख्त उनी पोख्त छन् । रामशंकले कम्पनीमा १२ वर्ष बिताइसकेका छन । पुरस्कार पाउँदा निकै खुशी लागेको उनी’हरुले बताएका छन् ।
कम्पनीले बेला’बेलामा कम्प’नीमा कार्यरत का’मदारलाई प्रोत्साह’नस्वरुप सुनको सिक्का, नगद इनाम र प्रमा’णपत्र दिने गरेको छ । – खबर हब बाट
Prevनेपालमा आज कोरोनाको कारण थप २ जनाको मृत्यु, मृ’त्यु हुने कहाँ कहाँका ? हेर्नुहोस्…
Nextयस्तो परिवार : जसमा बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज! बाबुआमा, छोराको यस्तो थियो पहिलो उडान !
आज नेपालमा संक्रमित भन्दा नीको हुनेको संख्या बढी, कति संक्रमित थपिए र कति नीको भए ? हेर्नु`होस्
प्रकाश सपुतको सबैलाई रुवाउने भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
आजपनि सुनको भाउ बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ? हेर्नुहोस्